Translator Newsletter: Fandikan-teny & Maha-Olona, Radio Ambulante, sy maro hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2019 18:52 GMT
Nahatratra ny Alatsinainy daholo!
Antenaiko fa mahafafinaritra ny fanombohan'ny herinandronao! Manana taratasim-baovao feno tsara ho anao izahay, ka andeha hiditra amin'izany avy hatrany!–
Fandikanteny sy fifampizarana mahaolona
Pikantsary avy amin'ny www.theglobeandmail.com
Ahoana ny fiovan'ny fomba fijerinao izao tontolo izao rehefa manana dikany tokana amin'ny fiteny samihafa ny voambolana? Kim Echlin, izay nanolo-tena handika ny tononkalo Someriana, mamakafaka ity lohahevitra ity ao amin'ny lahatsorany farany ho an'ny The Global and Mail izay mitondra ny lohateny hoe, “Asam-pifampizarana mahaolona ny fandikan-teny avy amin'ny fiteny iray mankany amin'ny iray hafa“. Hoy izy:
Tiako ny fomba namolavolan'ireo fanoharana natsangana ireo ny fomba fijerintsika izao tontolo izao. Amin'ny teny Ojibway, ohatra, ajiidamoo no voambolana anondroana ny “atsidy vazaha”, izay midika hoe “mpihanika mivadika ambony ambany.” Rehefa nahafantatra io teny io aho, dia tsy nitovy intsony ny fijeriko ny atsidy vazaha mihetsiketsika manodidina ny hazo.
Efa niaina izany ve ianao nandritra ny asanao amin'ny fandikan-teny? Lazao aminay ny fiantraikan'ny dia nataonao tamin'ny fiteny tamin'ny fomba fijerinao an'izao tontolo izao.
Resadresaka momba ny fandikan-teny ao amin'ny Fihaonana madinika GV
Manomboka ny Fihaonany madinika voalohany amin'ny alàlan'ny andianà Google Hangouts ny GV Amerika Latina ary hoahafinaritra tokoa izany!
Misokatra ho an'ny vondrom-piarahamonina GV manontolo ny Fihaonana Madinika ary handrakotra lohahevitra isan-karazany, anisan'izany ny resadresaka manontolo natokana ho an'ny fandikan-teny, izay tarihin'i Laura Vidal be fitiavana. Jereo ny fandaharam-potoana feno ary midira miaraka aminay!
Fandikan-teny miaraka amin'ny Radio Ambulante
Pikantsary nalaina tao amin'ny radioambulante.org
Mitady mpandika teny Espaniola ho amin'ny teny Anglisy ny Radio Ambulante mba hiditra ao amin'ny ekipany. Ho an'ireo izay tsy zatra azy ireo, “ny Radio Ambulante dia fandraketam-peo “podcast” amin'ny teny Espaniola izay mitantara an'i Amerika Latina any amin'ny faritra rehetra miteny Espaniola, anisan'izany i Etazonia.”15 dolara isan'ora ny karama ary mitaky adiny 5-10 ora isan-kerinandro. Fantaro bebe kokoa ato ny momba izany!
Pikantsary nalaina tao amin'ny www.colorlines.com
Ny fanentanana Drop the I-Word dia mikasa ny hanafoana ny teny hoe “tsy ara-dalàna” rehefa miresaka mpifindra monina sy ny vondrom-piarahamonina mainty hoditra. Resahin'ny Color Lines ny “endrika fanesorana mahaolona sy tsy araka ny tokony ho izy amin'ny teny-i” ary manome “toerana ho an'ny mpifindra monina hilazana ny tantaran-dry zareo.” Fantaro bebe kokoa ato ny momba azy ireo sy ny fomba ahafahanao mandray anjara!
Toro-lalana ho an'ireo fiteny atahorana ho faty
Pikantsary nalaina tao amin'ny www.hopesandfears.com
Efa nanontany tena ve ianao hoe inona no mahatonga ny fiteny ho faty ary ahoana no ahafahantsika manavotra azy ireny? Efa natao ve izay hanavotana azy ireo? Miresaka momba ity lohahevitra ity amin'ny torolalana feno momba ny fiteny indizeny amin'izao fotoana izao sy izay mahatonga azy ireo ho atafahorana ho faty ilay mpandray anjara ao amin'ny Hopes and Fears, Ben Macaulay, mpianatra ho PhD ao amin'ny City University of New York. Fantaro bebe kokoa ato ary henoy ireo santionan'ny raki-peo!